Soocelinta & Is-weydaarsiga: 45 Maalmood oo Soo Noqosho ama La Isweydaarsado - Nalalka MediaLight eexda
Soo Celinta & Is-weydaarsiga: 45 Maalmood oo Soo Noqosho ama Beddel
Haddii aad dhibaato kala kulanto qalabkaaga 'MediaLight', dhibaato kasta oo la qiyaasi karo waxaa lagu daboolayaa qaybtayada guud 5 sano warranty. Si kastaba ha noqotee, laga yaabee inaadan aqoon waxa aad amartay ama soo celisay TV-gaaga oo aadan mar dambe u baahnayn qalabkaaga 'MediaLight'.
Uma baahnid sabab aad ugu soo celiso MediaLight-kaaga lacag celin, laga jaray khidmadda dib u soo celinta iyo kharashyada dhoofinta ee safarka. (Si kastaba ha noqotee, bixinta sabab mararka qaarkood waxay dedejineysaa lacag celinta).
Fadlan nala soo xiriir si aad u hesho lambarka oggolaanshaha baayacmushtarka celinta (RMA) si aad ugu qorto xirmada. Soo noqoshada aan la fasaxin ee aan lahayn RMA way adkaan kartaa in la waafajiyo amar, taas oo keeneysa luminta sheyga iyo lacag celin kasta oo aad xaq u lahayd.
Marka xigta, fadlan noo soo celi badeecada "sida cusub" oo kale.
Waa maxay xaalad cusub?
Xaaladda alaabta laguu soo diray.
Iyada oo la waafajinayo heerarka warshadaha, cajalladaha Blu-ray iyo warbaahinta la soo baakadeeyey, markii la furo, ayaan u qalmin soo celinta. Sidoo kale, soo degsigu uma qalmo lacag celin. Cajalladaha cilladaysan ama dhaawacmay ayaa ah had iyo jeer u qalma isweydaarsiga
Dhammaan soo-celinta kale, waxaan kuu soo celin doonnaa qiimaha iibsigaaga oo laga jaray khidmad dib-u-habeyn ah oo aan sameynaynin sida caadiga ah ka badan 25% oo lagu daray rar, marka laga reebo haddii ay jiraan waxyaabo maqan ama waxyeelo xad dhaaf ah. Kharashka rarka dib looma soo celin doono mana bixinayno rarka rarka.
Xaaladda qaybaha maqan, ama xad-dhaaf ah waxyeelada soo gaadhay badeecadeena, waxaan xaq u leenahay inaan ka goyno khidmadda dib u celinta ee ilaa 100% qiimaha badeecada la soo celiyay. (Liiska oo dhameystiran oo ah waxyaabaha maqan iyo khidmadaha khidmadda ah ee dib-u-soo-celinta ah ayaa laga heli karaa xagga hoose ee boggan).
Haddii cutub la soo celiyo iyada oo aan la isticmaalin ama aan la furin, ma jiro wax lacag ah oo dib u habeyn ah. Kaliya codso RMA-U (RMA badeecada aan la furin) oo dib u dir.
Fadlan hubso inaad isticmaasho hab la raacaya, oo sheyga si fiican ugu hubso boosta. Lacag soo celin mayno haddii shay aan la helin ama "ka dhaco" xirmadiisa. Kaliya ku dheji calaamadda xirmada xirmooyinka 'MediaLight' ama 'LX1'.
Alaab kasta oo lagu iibiyo websaydhkan, adigaa mas'uul ka noqon doona bixinta kharashaadkaaga xamuul ee u gaarka ah soo celinta alaabtaada. Qiimaha rarka lama soo celin karo.
Ma jiraan wax lacag ah oo ku saabsan is-weydaarsiga ama beddelaadda dammaanadda ee gudaha Mareykanka. Dibadda Mareykanka, adiga ayaa mas'uul ka ah rarka is-weydaarsiga.
Si lacag celin loogu bixiyo, dhererka dhan ee MediaLight, oo ay kujiraan qaybaha googo'ay, waa in lasoo celiyo. Fadlan u oggolow 3-4 toddobaad si sheygaaga loo baaro kahor intaan lacag celin la bixin.
Haddii aadan hubin inaad rabto inaad isticmaasho ama aad si joogto ah u rakibto laydhadhka, fadlan ha ka saarin taakuleynta guska cas oo ha jarin xariiqa. Isticmaal cajalad wejiga lagu duugo ama cajalad kale oo ku-meel-gaadh ah oo ku-meel-gaadh ah si aad u tijaabiso rakibidda ka hor inta aanad raacin rakibidda.
Haddii unugga oo dhan aan la soo celin, oo ay ku jiraan baakadaha, fiilooyinka, cabbiraadaha iyo kontoroolada fog, xaq uma laha in laguu soo celiyo dib ayaan kuugu soo diri doonnaa haddii aad ku sugan tahay Mareykanka. Haddii aad ka baxsan tahay Mareykanka, waxaan kuu soo celin doonnaa oo keliya haddii aad bixiso khidmadaha rarka.
Lacag bixinno dheeri ah oo dib u habeyn ah oo loogu talagalay qaybaha maqan ama macaamiisha waxyeello u geysteen (khidmadahaas waxaa sii dheer khidmadaheena dib u soo celinta iyo u dhigma qiimaheena shaygan markii si gooni ah loo iibiyo)
Xakamaynta fogaanta iyo / ama iftiinka: $ 10
.5m ama 4ft kordhin: $ 5
Adapter AC: $ ​​6.50
Wareejinta USB: $ 4.00
MediaLight Strip: Lacag celin laguma soo celiyo mooyee
Hoolka Siraha: $ 8
Maqnaanshaha qaybaha MediaLight iyo LX1: Waa la qiimeeyay, oo ku saleysan qiimaha iibka.